दशैंमा दीनदुःखीको चुल्हो बाल्दै, उपेन्द्र - Tulsipur Online
दशैंमा दीनदुःखीको चुल्हो बाल्दै, उपेन्द्र
Posted by News Desk | २७ आश्विन २०७८, बुधबार २०:०६ |
२७ असोज / घोराही तुलसीपुर सडकखण्डको पर्सेनी चोकदेखि एक सय मिटर उत्तरतर्फ लागेपछि बाटोकोे छेवैमा एउटा पुरानो घर छ । जसको भित्तामा सेतो पर्दा टाँगिएको छ र लेखिएको छ, जय जीव । त्यहाँ पुगेपछि भेटिन्छन्, तुलसीपुर–७ जीतपुर निवासी उपेन्द्र पौडेल । जो जीवहरुप्रति दया, रक्षा र सेवाका कुरा गर्छन् । यतिबेला उनी मानव सेवामा तल्लिन छन् । खाद्यान्न अभावकाकारण समस्यामा परेकाहरुको पनि दशैं खुशीयालीपूर्ण बनाउने कोसिसमा जुटेका छन् । उनीहरुकै सेवामा व्यस्त छन् ।
उनका लागि यो काम नौलो होइन, उनले विभिन्न समयमा विविधकारणले समस्यामा परेकाहरुलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । कहिले लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरुलाई खाद्यान्न सहयोग, कहिले विभिन्न रोगका कारण आर्थिक समस्यामा परेकाहरुलाई आर्थिक सहयोग त कहिले विभिन्न ठाउँका मन्दिरबाहिर बसेका दीनदुःखीहरुलाई खाना तथा आफू सक्दो आर्थिक सहयोग । यो सबै उनका लागि नियमित कर्म जस्तै बनेको छ । ‘मेरो सानो सहयोगले कसैलाई थोरै भए पनि राहत मिल्छ भने सहयोग किन नगर्ने ? यदि कोही समस्यामा परेको सुनें भने सम्भव भएसम्म त्यहाँ पुग्छु र आफूसक्दो सहयोग गरेरै फर्कन्छु ।’ उनी भन्छन्– ‘धर्म भनेको यही त हो ! जीवहरुको सेवा, मानव सेवा ।’
पाँच वर्षअघि रोजगारीको सिलसिलामा दुबई पुगेका उनले विगत तीन वर्षदेखि सामाजिक सेवामा सरिक हुँदै आएका छन् । कोभिडको महामारीका बेला उनी विदेशमा थिए, त्यतिबेला पनि उनले विभिन्न सामाजिक अभियानहरुलाई आर्थिक सहयोग पठाएर आफ्नो सहभागीता जनाइरहे । दशैं लगत्त उनी पुनः वैदेशिक रोजगारीको लागि फर्किदै छन् तर पनि अहिलेसम्म उनी घर परिवारमाभन्दा धेरै सयम समाज सेवामै बिताइरहेका छन् । हाल उनले पर्सेनीमा कोठा भाडा लिएर चामल भण्डारण गरेका छन् र त्यहीबाट सहयोग गर्दै आएका छन् ।
भर्खरै दशैं लक्षित गरी १५ भन्दाबढी अति विपन्न परिवारलाई दाल, चामल, नुन, तेललगायतका खाद्यान्न सहयोग गरिसकेका छन् भने सहयोगको क्रम जारी छ । हजुरको यो सहयोग कहिलेसम्म चल्छ, भनेर सोध्दा उनी भन्छन्– ‘त्यो त मलाई पनि थाह छैन तर जहिलेसम्म सक्छु, जति सक्छु सहयोग गर्छु ।’ बेलाबखतमा सामान्य अवस्था भएका मान्छेहरुले पनि सहयोग माग्ने गर्छन् । यो सहयोग विशुद्ध आर्थिक विपन्नता भएकाहरुकोले अनावश्यक दुःख नदिन उनले आग्रह गरे ।
यतिबेला दशैं नजिकिएको छ । सबै आ–आफ्नै चाँजोपाँजो मिलाउनमा व्यस्त छन् । उनी भने दशैंका बेला खाद्यान्न अभावका कारण कसैको पनि दशैं निराशापूर्ण नहोस्, भन्ने अभियानमा जुटेका छन् । भर्खरै मात्र उनले आसपासका खाद्रे, बनहरी, पर्सेनी, डाबरलगायतका दजनौं गाउँ घुमेर अति विपन्नहरुको पहिचान गरी थुप्रै परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्– ‘दशैंमा हामी र हाम्रो परिवार मात्रै खुशी भएर हुन्छ र ? हाम्रै आसपासमा अन्न नभएकै कारण कसैको घरमा चुल्हो बलेन भने त्यो खुशीको के अर्थ ? सबैले हाम्रा वरपर भएका दीनदुःखी तथा विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्नुस् । यदि हुँदैन भने मलाई खबर गर्नुस्, म सहयोग छु ।’
Previousसल्यानको खैराबाङ मन्दिरमा अहिले सम्मकै अत्यधिक भिडभाड
Nextनेपाल पहिलो पटक साफको फाईनलमा